ထူးဆန်းတဲ့အရပ်က စာတိုက်ပုံးများအကြောင်း - JAPO Japanese News
ကြာ 02 Dec 2021, 10:35 မနက်
ဂျပန်ရဲ့မြို့ပေါ်မှာလမ်းလျှောက်သွားလိုက်ရင် ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ထားထားတဲ့ အနီရောင်သံဗုံးလေးတွေကိုတွေ့ရမှာပါ။
မြို့ပေါ်မှာသာမကဘဲ ကျေးလက်ဒေသဘက်မှာလည်း အဲ? ဒီလောက်တောကျတဲ့ရွာဘက်မှာတောင်မှလား? ဆိုပြီး အံ့သြသွားရမယ့်နေရာမှာ စာတိုက်ပုံးလေးတွေကို ထားထားပေးပါတယ်။
ဒီနေရာမှာထည့်ထားတဲ့စာတွေနဲ့ ပို့စကတ်တွေကို စာပို့သမားကပုံမှန်လာယူလေ့ရှိပြီး၊ ဂျပန်တစ်နိုင်ငံလုံးကိုသာမက ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးကိုပါ ပို့ပေးပါတယ်။
messengerရော၊ e-mail ရော၊ ဖုန်းပါခေတ်မစားသေးတဲ့အချိန်ကာလမှာ၊ ချစ်ရတဲ့လူတွေဆီ နှုတ်ခွန်းဆက်ခြင်းနဲ့သတိရကြောင်းတွေကို ပြောဖို့အတွက်က စာနဲ့ ပို့စကတ် (၂) မျိုးကိုအဓိကထားခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီအပြင် ဒီလိုအခြေခံအဆောက်အအုံကို ဂျပန်တစ်ခွင်မှာ စေ့စပ်စွာအသုံးပြုကြတာက၊ ဂျပန်ရဲ့အသွင်ပြောင်း အလေ့အထတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုကျေးလက်ဒေသမှာပါထားပေးပြီး၊ စာလာယူတဲ့သူအဖို့ တော်တော်ဒုက္ခရောက်မယ့်နေရာထိကို ထားပေးခြင်းဖြင့်၊ လူတိုင်းအားလုံး တန်းတူညီမျှစွာ ဒီလိုအခြေခံအဆောက်အအုံကို အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအပြင် အသွင်ပြောင်းစာတိုက်တွေကို နေရာအမျိုးမျိုးမှာထားလာကြပါတယ်။
ဂျပန်မှာရှိတဲ့ အရမ်းလှတဲ့နေရာတွေမှာထားပေးထားတဲ့ စာတိုက်ပုံးများကို မိတ်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။
၁။ ပင်လယ်ကြမ်းပြင်ပေါ်က စာတိုက်
နွေးထွေးတဲ့ရာသီဥတုနဲ့ အရမ်းလှတဲ့ပင်လယ်တို့ကြောင့် သာယာတဲ့ Wakayama စီရင်စု၊ Nishimuro အရပ်မှာတော့ ပင်လယ်ထဲမှာ စာတိုက်ပုံးတစ်ခုရှိပါတယ်။
ရေအနက် ၁၀ မီတာခန့်ရှိတဲ့ ပင်လယ်ကြမ်းပြင်မှာ စာတိုက်ပုံးကို ထားပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ပင်လယ်ရေအနက်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုပေမဲ့၊ ထူးဆန်းတာက ဒီစာတိုက်ပုံးဟာ အသုံးပြုလိုက်ရတယ်တဲ့။
ဒီနေရာမှာ ပို့စကတ်ကိုထည့်လိုက်ရင် လာယူပေးပြီး၊ စာကိုလည်းသေသေချာချာပို့ပေးပါတယ်။
စာတွေကိုလာယူပေးတာကတော့ အဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့ ရေငုတ်ဆိုင်ကပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရေငုတ်ဆိုင်မှာတော့ ပင်လယ်စာတိုက်အတွက် သီးသန့်ပို့စကတ်များကို ရောင်းချပေးနေပါတယ်။
ရေစိုခံပို့စကတ်ဖြစ်ပြီး Marker pen ဖြင့် ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
စကားမစပ် ၁၀ မီတာဆိုတာ သာမန်လူတစ်ယောက် ရေငုတ်နိုင်တဲ့အကွာအဝေးတော့မဟုတ်ပါဘူး။
ကျွမ်းကျင်ရေငုတ်သမားတစ်ယောက် မဟုတ်ဘူးဆိုရင် များသောအားဖြင့် Scuba Diving နဲ့သွားကြပါတယ်။
စောစောကပြောတဲ့ ရေငုတ်ဆိုင်မှာတော့ ရေငုတ်သင်ပြီးအမှတ်တရအဖြစ် ပို့စကတ်ပို့ခြင်းစတဲ့ အရမ်းကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံကိုလည်း ရယူနိုင်ပါတယ်။
ပင်လယ်ထဲမှာရေငုတ်နေပြီးဟ！ရေငုတ်ရင်းနဲ့ဖြစ်လာတဲ့ဒီလိုခံစားချက်ကို ပို့စ်ကတ်မှာ ချက်ချင်းရေးချင်လာတဲ့အခါ၊ ရေထဲမှာရောက်နေလို့ မရေးနိုင်တာကတော့ သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ပါ။
ပင်လယ်ထဲကိုမခုန်ဆင်းသွားခင်၊ ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ မိမိကိုယ်ကိုအရင်တွေးကြည့်ရင်း တစ်ဖက်လူကိုစာရေးကြတာပေါ့..
Shizuoka စီရင်စု Ito မြို့မှာလည်း ဒီလိုပင်လယ်ရေအောက်စာတိုက်ပုံးတစ်ခုရှိပါတယ်။
ရေအောက်ပို့စကတ်များကို ဒီနေရာမှာရောင်းချပေးပေမဲ့၊ ယူလာတဲ့ပို့စကတ်ကိုလည်း ပလတ်စတစ်လောင်းပေးတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုရှိပါတယ်။
၂။ ချစ်သူများရဲ့ မြင့်မြတ်ရာမြေ “ ကောင်းကင်စာတိုက်”
Mie စီရင်စုမှာ၊ Ise မြို့ကနေ Toba မြို့ကို ဆက်သွယ်ထားတဲ့ Ise-Shima Skyline လို့ခေါ်တဲ့ တိုးဂိတ်ဖြတ်ရတဲ့အဝေးပြေးလမ်းမတစ်ခုရှိပါတယ်။
ဒီလမ်းမပေါ်မှာတော့ Ise ပင်လယ်အော်ကို အပေါ်စီးကနေလှမ်းမြင်ရတဲ့ တောင်ထိပ်ရှုခင်းကြည့် viewpoint တစ်ခုရှိပါတယ်။
ဒီ viewpoint မှာ စာတိုက်ပုံးလေးတစ်ခုထားထားပေးပါတယ်။ ဒီစာတိုက်ပုံးလေးဟာ ပျံသန်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးမြင်ရတာကနေ ကောင်းကင်စာတိုက်ပုံးလို့ အမည်တွင်သွားပါတယ်။
အသေးစိပ်အချက်အလက်ကိုတော့မသိပေမဲ့၊ ဒီနေရာကို ချစ်သူများရဲ့မြင့်မြတ်ရာမြေအဖြစ် သတ်မှတ်ထားတာကြောင့် ဒီနေရာမှာ အချစ်သဝဏ်လွှာတွေကို ပို့မယ်ဆိုရင်တော့ အရမ်း Ro မှာပါ။
ကောင်းကင်ကအချစ်နတ်ဘုရားကလည်း စုံတွဲတွေကိုအားပေးနေမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
၃။ ဂျပန့်အမြင့်ဆုံး ဖူဂျီတောင်ထိပ်ကစာတိုက်ပုံး
ဂျပန်မှာ နံပါတ်တစ်အမြင့်ဆုံးတောင်ကတော့ ဖူဂျီတောင်ပါ။ ၎င်းတောင်ထပ်ပေါ်မှာ စာတိုက်ပုံးလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။
အားသာချက်က ရေငုတ်တာနဲ့မတူဘဲ၊ အဲ့ဒီနေရာရောက်မှ စာရေးနိုင်တာကြောင့် ဖူဂျီတောင်ပေါ်တက်နိုင်ခဲ့တဲ့အောင်မြင်မှုကိုပါ စာထဲထည့်ရေးပြီးပို့နိုင်ပါတယ်။
အခြားသောစာတိုက်ပုံးတွေနဲ့မတူတာကတော့ စာတိုက်ပုံးသာမကဘဲ၊ စာတိုက်ရုံးပါရှိနေတယ်။
အမှတ်တရတံဆိပ်ခေါင်းများနဲ့ မူရင်းပို့စကတ် တွေကိုပါရောင်းချပေးပါတယ်။
သို့သော်လည်း ပုံမှန်အားဖြင့် နွေရာသီမှသာတောင်တက်နိုင်ပါတယ်။
စကားမစပ် ဝန်ထမ်းတွေဟာ နေအိမ်ကနေနေ့တိုင်း အလုပ်လုပ်ဖို့တော့မဖြစ်နိုင်တာကြောင့်၊ တစ်ပတ်အကြာမှာ အလှည့်ကျနဲ့လာကြပုံရပါတယ်။
“ အလုပ်သွားလိုက်အုံးမယ်နော်” ဆိုပြီး ဖူဂျီတောင်ပေါ်တက်သွားတဲ့အဖေ အရမ်းမိုက်တယ်နော်..
အခြားသော ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အရှေ့ဘက်အကျဆုံး စာတိုက်ပုံးကတော့ Hokkaido ရဲ့ Nemuro အရပ်မှာရှိပြီး၊
အနောက်ဘက်အကျဆုံးအရပ်မှာရှိတာကတော့ အိုကီနာဝါစီရင်စု၊ Yonaguni ကျွန်းပေါ်၊
မြောက်ဘက်အစွန်ဆုံးစာတိုက်ပုံးက Hokkaido ရဲ့ Wakkanai မြို့မှာဖြစ်ပြီး၊
တောင်ဘက်အစွန်ဆုံးစာတိုက်ပုံးကတော့ အိုကီနာဝါစီရင်စု၊ Hateruma ကျွန်းပေါ်မှာ တည်ရှိပါတယ်။
Hateruma ကျွန်းကတော့ ဒီမှာပါ။
ဒီကျွန်းက ထိုင်ဝမ်နဲ့နီးပြီး၊ တိုကျိုထက်စာရင် ဖိလစ်ပိုင်နဲ့ပိုနီးပါတယ်။
Messenger ဒါမှမဟုတ် E-Mail နဲ့အလွယ်တကူလေး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကို ချက်ချင်းစာပို့နိုင်တဲ့ခေတ်မှာ နည်းပညာတွေကြွယ်ဝလာပေမဲ့၊ နှလုံးသားအပြည့်နဲ့ ကိုယ်တိုင်လက်ရေးနဲ့ရေးထားတဲ့ ပို့စကတ်ကိုပို့ရတာကလည်း ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပိုလေးနက်စေပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးတောင် ထူးဆန်းပြီးလှတဲ့နေရာကနေပို့လိုက်တဲ့ ပို့စကတ်ကတော့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာအများကြီးကို သယ်လာပေးမယ့်ပုံပါပဲ…
နှစ်သစ်ကြိုဆိုဖို့အတွက် ‘Demon Slayer’ ရဲ့ဇာတ်ကောင်ပါ စာတိုက်ပုံးများကို တိုကျိုရှိ Ikebukuro တွင်မိတ်ဆက်
Dragon Ball အစွမ်း အံ့မခန်း
သင့်အသားအရည်ရဲ့ အောက်ခံ base အရောင်က ဘာဖြစ်မလဲ? အသားအရည်ရဲ့ အရောင်နဲ့လိုက်ပြီး သိနိုင်တဲ့ သင်နဲ့ကိုက်ညီမယ့် သင်တစ်ဦးတည်းရဲ့အရောင်！